Ukuthuthukiswa kwe-Gearbest - Ukuzikhethela okuphephile
I-Jumper EZBOOK 3S Notebook
Intengo: 🇪🇺 268.38 € / 🇧🇷R $ 1110.20
Indawo yokugcina impahla: China, Hong Kong (HK-4)
Shipping (China, Hong Kong): Umzila oPhambili
Shipping (Europe): Noma iyiphi inketho
Huawei Hlonipha i-6X
Intengo: 🇪🇺 139.52 € / 🇧🇷R $ 573.29
Indawo yokugcina impahla: Hong Kong (HK)
I-Nubia Z17 Mini
Intengo: 🇪🇺 147.73 € / 🇧🇷 R $ 611.33
Indawo yokugcina impahla: Hong Kong (HK), United Kingdom (GW-2)
32GB Samsung Class 10 48mb / s TF / Micro SD UHS Memory Memory
Intengo: 🇪🇺 13.12 € / 🇧🇷R $ 54.29
Indawo yokugcina impahla: China
Shipping (China, Hong Kong): Noma iyiphi inketho
I-Y2 Plus i-Smart Bluetooth i-Wristband
Intengo: 🇪🇺 9.02 € / 🇧🇷 R $ 37.32
Xiaomi My Sphere Ikhamera ye-4K Panorama Action Camera
Intengo: 🇪🇺 179.74 € / 🇧🇷R $ 743.61
Intengo: 🇪🇺 24.61 € / 🇧🇷R $ 101.81
Intengo: 🇪🇺 101.77 € / 🇧🇷R $ 421.14
Ikhuphoni kuphela etholakala eWarehouse Hong Kong (HK-2)
Indawo yokugcina impahla: China, Hong Kong (HK-2, HK-4), United Kingdom (GW-2)
Shipping (China, Hong Kong): U-Priority Line
Xiaomi Ultra-thin 10.000mah Mobile Power Bank 2
Intengo: 🇪🇺 15.59 € / 🇧🇷R $ 64.49
I-Xiaomi mijia Smart Home I-Aqara Security Kit
Intengo: 🇪🇺 46.78 € / 🇧🇷R $ 193.46
FAQ - Imibuzo Ebuzwa Ngokujwayelekile
Ngifake isigqebhezana sami se-Discount, kodwa isigqebhezana sesivele siphelelwe yisikhathi?
I amakhuphoni inomkhawulo ukusetshenziswa noma esiphelelwe isikhathi, isibonelo, Xiaomi redmi Phawula 4 kwadingeka 500 Isaphulelo amakhuphoni, kodwa lezi amakhuphoni 500 Isaphulelo ziye zasetshenziswa zonke, ngesinye isimo, isigqebhezana Isaphulelo uqede 31 Januwari . Ngokushesha ngemva kwalolo suku amakhuphoni avalwa.
Ngasebenzisa isigqebhezana se-Discount, kodwa ingabe iphakamisa intengo?
Uma kwenzeka lokhu kungenxa yokuthi lo mkhiqizo unokukhuthazwa okukhulu, noma ku-Flash Sale. Kulezi zimo akufanelekile ukusebenzisa amakhuphoni e-Discount.
Uyini umehluko phakathi kwe-Flash Sale ne-Discount amakhuphoni?
Ukuthengisa kwe-Flash kuvame ukusetshenziselwa ukuvuselela / ukuhlanza isitokwe sezinkampani. Uma kwenzeka lokhu kuyithuba elihle lokuthenga imikhiqizo ngamanani aphansi, ama-Flash Sales ngokuvamile ahlala isikhathi esincane kakhulu.
Amakhuphoni esaphulelo akhuthaza umthengi ukuthi athenge, ukuze uthole imali encane.
Ingabe ufuna ngisho nokuthenga namasiko?
Imiyalo eminingi iyakwazi ukuguqula kusuka enkambweni yamasiko yizinkontileka ezihlukahlukene lezi zinkampani ezinayo nabasakaza emazweni amaningana. Sivumelanisa ngaso sonke isikhathi indlela yokuThumela phambili, ngoba ngaphezu kokushesha (izinsuku ezingu-7-20 zokusebenza) kungenzeka ukuthi zibalekele le nqubo. Uma kwenzeka ukuthi into encike ekukwenzeni intela (intela), kuwumthwalo wakho ukukhokha intela yentela, seleccionasegura.com kanye nabalingani bayo abangekho abanomthwalo wemfanelo uma lokhu kwenzeka.
Kungani imikhiqizo emajondolo aseYurophu ebiza kakhulu?
Ziyakwazi ezibizayo ngenxa lezozinqalazizinda, imikhiqizo emafektri European musa idlule amasiko futhi ube nesikhathi ongeke ukulethwa isilinganiso izinsuku 7-10.
Unayo yini ikhasi le-facebook mayelana nezaphulelo?
Yebo senza, ikhasi libizwa ngokuthi "izaphulelo ze-VIP".
I-url yekhasi kanje: https://www.facebook.com/descontossvip/